မိမိမှာ ထီပေါက်ကိန်းရှိ/မရှိ သိချင်ရင် အလွယ်တကူ တွက်ကြည့်နည်း – Zartiman
မိမိမှာ ထီပေါက်ကိန်းရှိ/မရှိ သိချင်ရင် အလွယ်တကူ တွက်ကြည့်နည်း
Zarti Man | May 10, 2020 | Knowledge | No Comments
လူတိုင်း လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားဆုံး အချိန်တစ်ခုကား ဘယ်အချိန် လာဘ်ရွှင်၊ ငွေရ၊ ထီပေါက် မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အိုကေ…. အောက်မှာ ဖော်ပြ မယ့် ထီပေါက်ကိန်း မဟာဗျူဟာတစ်ခုကို စမ်းသပ်ကြည့်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ တစ်နှစ်တာ လုံးတွင် ထီပေါက်ကိန်းကာလကို တွက် ချက်ခြင်း တစ်နှစ်တာလုံးတွင် မိမိအတွက် ထီပေါက်မည့်ကာလဆိုတာရှိပါတယ်။
ယင်းကာလကို ရရှိရန် မွေးသောလနှင့် မွေးသောရက်ကိုယူ၍ တွက်ချက်ရပါမည်။ မိမိ၏မွေးလနှင့် မွေးရက်ကို (၆)လနှင့် (၂၈)ရက် ထည့် ပေါင်းပါ။ လတွင် ၁၂ ထက်များပါက ၁၂ နုတ်ရမည်။ မပိုလျှင် နုတ်စရာမလိုပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်၍ ရသောအဖြေသည် တစ်နှစ်တာလုံးတွင် မိမိအတွက် ထီပေါက်ကိန်းကာလစတင်သည့်နေ့စွဲဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် (၆)လပိုင်း (၂၈)ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသော သူအတွက် ထီပေါက်ကိန်းစတင်သည့် ကာလမှာ (၅)လပိုင်း (၂၃)ရက် ဖြစ်သည်။
အထက် ဖော်ပြပါ ထီပေါက်ကိန်း စတင်သည့် ကာလကို (၁)လနှင့် (၂၂)ရက် ပေါင်းပါ။ သို့ဖြစ်ပါ ၍ ထိုသူ၏ ထီ ပေါက်ကိန်း ကုန်ဆုံးမည့် ရက်မှာ (၇)လပိုင်း (၁၅)ရက် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် (၁၀)လပိုင်း (၂၅)ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောသူအတွက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မေလ၂၃ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်အတွင်း ထီပေါက်ကိန်း ရှိနေပါတယ်။
ထီ ပေါက် ကိန်း ရှိ မ ရှိ ဒီ လို လေး တွက် ကြည့် လို့ ရ ပါ တယ် ….
စ လေ ဦး ပု ည ရဲ့ ထီ ပေါက် ကိန်း ရှိ မရှိ တွက် နည်း လေး ပါ … ။
(1) မိ မိ ရဲ့ မြန် မာ မွေး ခု နှစ် ကို တည် မိ မိ ရဲ့ ဂြိုဟ် သက် နှင့် ပေါင်း ပါ။
(2) ပေါင်းပြီး ၄၃နဲ့ (÷)ပါ။
(3) ရရှိတဲ့ အကြွင်းနဲ့ မိမိရဲ့ အသက်နဲ့ ထပ်ပေါင်းပါ။
မိမိအသက်ဆိုတာ ၂၉ပြည့်ပြီးလျှင် ၃ဝလို့ ယူရပါမယ်။
(4) ပေါင်းပြီးလျှင် ရနဲ့ ထပ် (÷)စားပါ။
ဝကြွင်း၊ ၅ကြွင်းဆို ထီဆုကြီးပေါက်မည်။
၁ကြွင်း၊ ၆ကြွင်းဆို ထီဆုသေး ဖြစ်မည်။
ထိုသို့ ပေါက်ဖို့အခွင့်ရှိလာလျှင် မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို တည် ရဖြင့် ထပ် (÷)စားပါ။
၁ ကြွင်း = ရအစ ၅အဆုံး၊ ၆အစ ၅အဆုံး
၂ ကြွင်း= ၁အစ ၆အဆုံး၊ ၆အစ ရအဆုံး
၃ ကြွင်း= ၂အစ ရအဆုံး၊ ၅အစ ရအဆုံး
၄ ကြွင်း= ၃အစ ၁အဆုံး၊ ၂အစ ၁အဆုံး
၅ ကြွင်း= ၄အစ ၂အဆုံး၊ ၃အစ ၂အဆုံး
၆ ကြွင်း= ၅အစ ၃အဆုံး၊ ၃အစ ၄အဆုံး
0 ကြွင်း= ၆အစ ၄အဆုံး၊ ၅အစ ၄အဆုံး
ထိုဂဏန်းလေးတွေ ထိုးဖို့ အကြံပြု အပ်ပါသည် … ။ စလေဦးပုည၏ ထီပေါက် မပေါက် တွက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထီပေါက်ချင်ရင် စာရေးတံမဲလှူကြပါ ။
မိမိမှာ ထီပေါကျကိနျးရှိ/မရှိ သိခငျြရငျ အလှယျတကူ တှကျကွညျ့နညျး
လူတိုငျး လူတိုငျး စိတျဝငျစားဆုံး အခြိနျတဈခုကား ဘယျအခြိနျ လာဘျရှငျ၊ ငှရေ၊ ထီပေါကျ မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အိုကေ…. အောကျမှာ ဖျောပွ မယျ့ ထီပေါကျကိနျး မဟာဗြူဟာတဈခုကို စမျးသပျကွညျ့ရနျ တိုကျတှနျးလိုပါသညျ။ တဈနှဈတာ လုံးတှငျ ထီပေါကျကိနျးကာလကို တှကျ ခကျြခွငျး တဈနှဈတာလုံးတှငျ မိမိအတှကျ ထီပေါကျမညျ့ကာလဆိုတာရှိပါတယျ။
ယငျးကာလကို ရရှိရနျ မှေးသောလနှငျ့ မှေးသောရကျကိုယူ၍ တှကျခကျြရပါမညျ။ မိမိ၏မှေးလနှငျ့ မှေးရကျကို (၆)လနှငျ့ (၂၈)ရကျ ထညျ့ ပေါငျးပါ။ လတှငျ ၁၂ ထကျမြားပါက ၁၂ နုတျရမညျ။ မပိုလြှငျ နုတျစရာမလိုပါ။ ထိုသို့ပွုလုပျ၍ ရသောအဖွသေညျ တဈနှဈတာလုံးတှငျ မိမိအတှကျ ထီပေါကျကိနျးကာလစတငျသညျ့နစှေဲ့ဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ (၆)လပိုငျး (၂၈)ရကျနတှေ့ငျ မှေးဖှားသော သူအတှကျ ထီပေါကျကိနျးစတငျသညျ့ ကာလမှာ (၅)လပိုငျး (၂၃)ရကျ ဖွဈသညျ။
အထကျ ဖျောပွပါ ထီပေါကျကိနျး စတငျသညျ့ ကာလကို (၁)လနှငျ့ (၂၂)ရကျ ပေါငျးပါ။ သို့ဖွဈပါ ၍ ထိုသူ၏ ထီ ပေါကျကိနျး ကုနျဆုံးမညျ့ ရကျမှာ (၇)လပိုငျး (၁၅)ရကျ ဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ (၁၀)လပိုငျး (၂၅)ရကျနတှေ့ငျမှေးဖှားသောသူအတှကျ နှဈစဉျနှဈတိုငျး မလေ၂၃ ရကျမှ ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျအတှငျး ထီပေါကျကိနျး ရှိနပေါတယျ။
ထီ ပေါကျ ကိနျး ရှိ မ ရှိ ဒီ လို လေး တှကျ ကွညျ့ လို့ ရ ပါ တယျ ….
စ လေ ဦး ပု ည ရဲ့ ထီ ပေါကျ ကိနျး ရှိ မရှိ တှကျ နညျး လေး ပါ … ။
(1) မိ မိ ရဲ့ မွနျ မာ မှေး ခု နှဈ ကို တညျ မိ မိ ရဲ့ ဂွိုဟျ သကျ နှငျ့ ပေါငျး ပါ။
(2) ပေါငျးပွီး ၄၃နဲ့ (÷)ပါ။
(3) ရရှိတဲ့ အကွှငျးနဲ့ မိမိရဲ့ အသကျနဲ့ ထပျပေါငျးပါ။
မိမိအသကျဆိုတာ ၂၉ပွညျ့ပွီးလြှငျ ၃ဝလို့ ယူရပါမယျ။
(4) ပေါငျးပွီးလြှငျ ရနဲ့ ထပျ (÷)စားပါ။
ဝကွှငျး၊ ၅ကွှငျးဆို ထီဆုကွီးပေါကျမညျ။
၁ကွှငျး၊ ၆ကွှငျးဆို ထီဆုသေး ဖွဈမညျ။
ထိုသို့ ပေါကျဖို့အခှငျ့ရှိလာလြှငျ မိမိ၏ မွနျမာမှေးခုနှဈကို တညျ ရဖွငျ့ ထပျ (÷)စားပါ။
၁ ကွှငျး = ရအစ ၅အဆုံး၊ ၆အစ ၅အဆုံး
၂ ကွှငျး= ၁အစ ၆အဆုံး၊ ၆အစ ရအဆုံး
၃ ကွှငျး= ၂အစ ရအဆုံး၊ ၅အစ ရအဆုံး
၄ ကွှငျး= ၃အစ ၁အဆုံး၊ ၂အစ ၁အဆုံး
၅ ကွှငျး= ၄အစ ၂အဆုံး၊ ၃အစ ၂အဆုံး
၆ ကွှငျး= ၅အစ ၃အဆုံး၊ ၃အစ ၄အဆုံး
0 ကွှငျး= ၆အစ ၄အဆုံး၊ ၅အစ ၄အဆုံး
ထိုဂဏနျးလေးတှေ ထိုးဖို့ အကွံပွု အပျပါသညျ … ။ စလဦေးပုည၏ ထီပေါကျ မပေါကျ တှကျနညျးဖွဈပါတယျ။ ထီပေါကျခငျြရငျ စာရေးတံမဲလှူကွပါ ။
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောပြခဲ့ တဲ့ လူသိ နည်းပြီး သတိမ မူမိကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကပ်ဆေးခြင်းေ ဘး မှ လွတ်ကင်း စေသော တန်ခိုးကြီး မားသည့် “အဋ္ဌာန မေတံ” ဂါထာတော် ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ..
ဆရာဝန်များပြောပြတဲ့ ကိုဗစ်-19 ကူးစက်မခံရအောင် ဈေးဝယ်နည်း
COVID-၁၉ကာလ မှာ ကလေးငယ်ရှိသော မိဘတိုင်း သိထား သင့်တဲ့ အရေးကြီး အကြောင်းအရာ